China Ukwakha uhlelo lwamanzi nogesi ifektri nabakhiqizi | Zhenyuan
Kubandakanya ukufaka amanzi (ukwakhiwa komdwebo wamanzi wokwakha kanye namapayipi amanzi) kanye nokufaka ugesi (umdwebo wokwakha ugesi wokwakha), ngokuhlanganyela owaziwa ngokuthi umdwebo wokwakhiwa kwamandla kagesi. Umdwebo wokwakhiwa wokwakhiwa kwamanzi kanye namapayipi kungenye yezingxenye zephrojekthi eyodwa ku iphrojekthi yobunjiniyela. Kuyisisekelo esiyinhloko sokunquma izindleko zephrojekthi nokuhlela ukwakhiwa, kanye nengxenye ebaluleke kakhulu yesakhiwo ....
Umklamo wamanzi nogesi ukuphepha, kusebenza ngaphezu kwakho konke, kungumhlobiso olandelayo.Isimiso sokuklanywa kwamanzi nogesi ukukwazi ukungahambi, singashintshi kalula; Uma kungaba mnyama, kuzoba mnyama. Ayikho imigqa ekhanyayo evunyelwe.
Umlobi wesitayela ufuna ngokusho kwesimo esithile sendlu, cindezela okuphephile → ukuvikelwa kwemvelo → okonga amandla → okusebenzayo → umyalo wokuthi umphumela onjalo uzocubungula, ufune umhlabathi womhlaba wonke wenelise okufunwa ngumnikazi.
Ngokuya ngezidingo zomsebenzi wokuklama, umdwebo wokwakhiwa kokuphakelwa kwamanzi kanye namapayipi kuzobandakanya umdwebo wesakhiwo (uhlelo olujwayelekile, uhlelo lokwakha), ukudweba kohlelo, umdwebo wemininingwane yokwakha (umdwebo omkhulu wesampula), incazelo yokwakhiwa kanye noluhlu kwezinto zokwakha ezisemqoka, njll.
Uhlelo lokuphakelwa kwamanzi nokuhambisa amanzi kufanele luveze ukwakheka kwamapayipi okuhambisa amanzi kanye namapayipi kanye nemishini.
Ukuhlinzekwa kwamanzi kwangaphakathi kanye namapayipi kuzosetshenziswa ukuthola inani lamapulani aphansi.Iphansi nendawo engaphansi kufanele kupendwe; Uma isitezi esiphezulu sinamathangi wamanzi nezinye izinto zokusebenza, nakho kufanele kudwetshwe ngokwehlukana; Izinhlobo, ubuningi nezindawo zaphakathi nendawo phansi kwesakhiwo, okufana nokuthuthwa kwendle noma imishini yamanzi, kuyafana futhi kungadwetshwa uhlelo olujwayelekile; uma kungenjalo, kufanele idwetshwe phansi yizinhlobo.Izinhlobo eziningana zamapayipi zingadwetshwa kuhlelo. Uma amapayipi eyinkimbinkimbi, angadonswa ngokwahlukana. Umgomo ngukuthi imidwebo ingayiveza ngokusobala inhloso yokuklama ngenkathi inani lemidwebo lincane. Ipayipi nemishini kufanele kugqanyiswe kuhlelo, okusho ukuthi ipayipi limelwe ulayini ojiyile, kanti yonke eminye imigqa emincane. Isikali sepulani yaphansi ngokuvamile siyefana naleso sohlelo lokwakha. Isikali esisetshenziswa kakhulu ngu-1: 100.
Uhlelo lokuphakelwa kwamanzi nokuhanjiswa kwamanzi luzoveza okuqukethwe okulandelayo: uhlobo, ubungako nendawo yegumbi elisebenzisa amanzi nemishini; Zonke izinhlobo zamapayipi asebenzayo, izesekeli zamapayipi, izinto zangasese, okokusebenza kwamanzi, njengebhokisi le-fire hydrant, ikhanda lokufafaza, njll., izomelwa yinganekwane; Ububanzi nemithambeka yazo zonke izinhlobo zamapayipi amakhulu avundlile, amapayipi amile namapayipi egatsha kufanele amakwe. Onke amapayipi azobalwa futhi akhonjiswe.
Incazelo yemidwebo ye-hydropower:
Kuyimidwebo yesakhiwo esithile nendawo yohlelo lokuphakelwa kwamanzi, uhlelo lokuhambisa amanzi nemishini kagesi, isiqondisi socingo nokukhanyisa endlini, futhi kuyisisekelo sokwakhiwa kwamanzi nogesi wendlu.
Uhlelo Lokwakha Amanzi Nogesi
Umdwebo wamanje oqinile1
Umdwebo wokuphakelwa kwamanzi
Umdwebo wamanje oqinile2
Langaphambilini Steel Uzimele Class
Olandelayo: Uzimele weNet, Isigaba Sokwakheka Kobungqingili